दक्षिण कोरियाका निर्देशक किम कि दुक दुर्लभ मान्छे हुन्। फिल्म तथा कलाको क्षेत्रमा कुनै शैक्षिक पृष्ठभूमि नभएका, विद्यालय छोडेका, फ्याक्ट्री र आर्मीमा समेत काम गरेका उनी पछिल्लो ५ वर्षयता भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलहरूमा चर्चित निर्देशकको रूपमा छाइरहेका छन्। उनले पहिलो फिचर फिल्म ‘क्रकोडायल‘ १९९६ मा बनाएका थिए। जुन एक अद्भुत व्यक्तिका बारेमा थियो। जसले सियोलको हान रिभरबाट आत्महत्या गरेका लासहरू निकाल्ने काम गर्थ्यो। दक्षिण कोरियाली फिल्म समाजमा एकदमै फरक धारको फिल्म भित्र्याएका उनले धेरै दर्शकलाई टाढा बनाए पनि फिल्मलाई मन पराउने उत्साही फ्यानहरू भने कमाएका छन्। सीमान्तकृत मानिसहरूको कथा तथा स्पेससँग खेल्न रूचाउने उनले मूलधारका कोरियाली फिल्महरूमा नयाँ धार र सौन्दर्य (एस्थेटिक्स) मिसाएका छन्, जसको चर्चा राम्रै हुने गरेको छ। त्यसैले पनि हो सायद कोरियाको बक्स अफिसमा असफल भए पनि उनका फिल्महरूले युरोपमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय फेस्टिभलहरूमा पर्याप्त चर्चा पाइरहेका छन्।
‘बर्डकेज इन’ (१९९८) ले पहिलोपल्ट उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म जगतमा चिनायो भने विवादास्पद फिल्म ‘दि इस्ल‘ (२०००) ले त्यसलाई अझै बढायो। महिला र पुरुषबीच हुने ‘विश्वव्यापी युद्ध’ हिंस्रक तरिकाले खोतल्ने उनका फिल्महरूले सन्डान्स र भेनिस फिल्म फेस्टिभलहरूमा दर्शकहरूलाई तर्साएका छन्। सँगसँगै फिल्ममा भेटिने पृथक् सौन्दर्य, सर्रियल इमेजरी र गहन काव्यिक सौन्दर्य सुन्दरताको पनि प्रशस्त प्रशंसा भयो। त्यसपछिको २०० मिनेट लामो फिल्म ‘रियल फिक्सन’ १० मोसन पिक्चर क्यामेरा र २ वटा भिडियो क्यामेराहरूको सहायतमा एकैपटक खिचिएको थियो। यो फिल्मले एक मान्छेको हत्या गर्ने हत्याराको साँचो र काल्पनिक आनन्दलाई समेटेको थियो। ‘एड्रेस अन्नोन‘ (२००१) उनको राजनैतिक फिल्म हो, जसले १९५० ताका भएको कोरियाली लडाइँको घाउका खतहरूलाई उप्काउने प्रयत्न गरेको थियो र सँगै अमेरिकी क्याम्पको समकालीन असरलाई पनि दर्साएको थियो। ‘ब्याड गाय’ उनको पछिल्लो सबैभन्दा चर्चित फिल्म हो, जुन बर्लिनको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभलमा पुगेको थियो। भोल्कर हुमेलले सेन्सअफसिनेमाडटकमका लागि लिएको यो अन्तर्वार्ता सुरज सुवेदीको अनुवादमा प्रस्तुत गरिएको छ।
मेरो फिल्ममा बोल्न नसक्ने मानिसहरू हुन्छन्, त्यसको एक मात्रै कारण के हो भने उनीहरू निक्कै गहिरो गरी घाइते भएका छन्। उनीहरूले अरू मानिसहरूलाई जुन विश्वास गर्थे, त्यो भत्किएको छ किनकि उनीहरूले गर्छु भनेका वाचाहरू पुरा गरेनन्। उनीहरूलाई मानिसहरूले म माया गर्छु त भने तर त्यसको महत्त्व बुझेर ख्याल गरेनन्। यही निराशाले गर्दा उनीहरूले विश्वास गुमाए र सबैसँग बोल्नै छाडिदिए। उनीहरू जुन हिंसातिर फर्किए नि त्यसलाई म बडी ल्याङ्गवेज भन्न रूचाउँछु। म त्यसलाई नकारात्मक हिंसा भन्दा पनि शारीरिक अभिव्यक्ति मान्छु। मेरो पात्रहरूमा हुने चिन्ह तथा घाउहरू उनीहरूले भोगेका तिनै अनुभवहरूका संकतहरू मात्र हुन्, जो उनीहरूले त्यो उमेरसम्म बाहिरी ट्रमासँग ‘रेस्पोन्ड’ गर्न सक्दैनन्। शारीरिक र बोलीले गरिने दुर्व्यवहारबाट उनीहरू आफूलाई बचाउनै सक्दैनन्। त्यो उनीहरूको आमाबाबुबाट पनि भइरहेको हुनसक्छ। वा सडकपेटीमा हिँडिरहेको बेलामा हुनसक्छ वा कसैले पिटेपछि। जब ती कुराहरू हुन्छन्, उनीहरू असहाय हुन्छन्। केही पनि गर्न सक्दैनन्। त्यस्तो अनुभवहरू उनीहरूलाई घाउ भएर बसेको हुन्छ। मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा त्यो भोगेको छु। उदाहरणको रूपमा म सानो हुँदा मभन्दा कान्छा तर बलिया केटाकेटीहरूले मलाई पिट्थे। म आफूलाई बचाउन सक्दिन थिएँ। सेनामा हुँदा पनि उच्च पदमा हुने सेनाहरूले मलाई बिनाकारण पिट्थे। यस्तो अनुभव भोग्दै गर्दा म आफैंलाई सोध्थेँ यस्तो कुराहरू साँच्चै हुनु जरुरी छ र? म निर्देशक हुन्जेलसम्म ती प्रश्नहरू मसँगै बसिरहे। र म अहिले तिनैलाई कस्तो सोच्थेँ वा महसुस गर्थेँ भन्ने सम्झिएर फिल्ममा व्यक्त गर्छु।
‘ब्याड गाय’को बारेमा कुरा गर्ने हो भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा हाङ गी (फिल्मको मुख्य पात्र) जस्तो मानिस मन पर्दैन। एक पटक संयोगबस मैले रेड लाइट एरियामा काम गर्ने मान्छे भेटेँ। उसले मलाई कुनै कारणबिना कुट्यो र मैले त्यसबेला उसलाई घृणा गरेँ। त्यो अवस्थामा मैले उसलाई बुझ्न सकिन तर म बुझ्नलाई प्रयास गर्न चाहान्थेँ। त्यो फिल्मको माध्यमबाट मैले त्यो पात्रको मानस वा साइकीमा पस्ने प्रयास गरेँ र ती सबै काम गर्न उसलाई केले बाध्य बनाउँछ भन्ने बुझ्ने प्रयास गरेँ।
हलिउडले तपाईंलाई निर्देशक लिएर ‘ब्याड गाय‘को रिमेक बनाउन खोजेको हल्ला छ नि?
तपाईंलाई लाग्दैन धेरै व्यक्तिगत र हिंस्रक ‘एस्थेटिक्स‘ हलिउडको सिस्टमसँग टकराव गर्दैन?
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २१, २०७४ ०५:०८:५६